नेपाल आज | तीन दिवसीय गणतन्त्र दिवसमा शहीदहरुको स्मरण
समाचार मुख्य समाचार प्रदेश २
तीन दिवसीय गणतन्त्र दिवसमा शहीदहरुको स्मरण
स्व. रामराजा प्रसाद सिंहको शालिक निर्माण गर्ने मुख्यमन्त्रीको उद्घोष
धनुषा । प्रदेश दुई सरकारले शहीदहरुलाई स्मरण गर्दै तीन दिनसम्म मनाएको ‘तीन दिवसीय गणतन्त्र दिवस’ आज सम्पन्न गरेको छ ।
दिवसको अन्तिम दिन आज मधेश भवनको कवर्डहलमा चियापान आयोजना गरिएको थियो । चियापन समारोहमा प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गणतन्त्रको स्थापनाका लागि बलिदानी दिने सम्पूर्ण अमर शहीदहरुको योगदानको सरकारले मुल्याङकन गर्ने बताए ।
अमर शहीदहरुको सपना पूरा गर्ने अभिभारा आफुहरुका काँधमा आएको स्पष्ट पार्दै उहाँले यसका लागि प्रदेश सरकार दृढ रहेको बताए।
लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यासको रुपमा रहेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सफलताको लागि प्रदेश सरकार सुशासन र समृद्धिलाई मुल आधार बनाएर अघि बढि रहेको मुख्यमन्त्री राउतले जानकारी दिए। सरकारको यस अभियानले अगामी दिनमा समेत निरन्तरता पाउने उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले गणतन्त्र स्थापनाको लागि अटुट संघर्ष गर्नु भएक स्व. रामराजा प्रसाद सिंहको सम्झनामा प्रदेश सरकारले यसै वर्ष शालिक निर्माण गर्ने उद्घोष समेत गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न समारोहमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, राज्यमन्त्रीहरु सरोज सिंह कुशवाहा, योगेन्द्र राय यादव, नीति आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरु, प्रदेश सभाका सांसदहरु, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साह, धनुषा जिल्ला समन्वय समितिका सभापति प्रदेश सरकारका कर्मचारी, सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरु सहभागी थिए ।
त्यसक्रममा नेपाली सेनाका टोलीले सलामी अर्पण समेत गरेको थियो ।